कसरी कन्जुगेट जर्मन नियमित नियमित भूकम्प क्रियाकलाप
जर्मन नियमित शब्द - पछिल्लो टेनिस
नियमित जर्मन क्रियाकलापहरू दुवै टाटा (सामान्य अतीत, वर्तमान सिद्ध) मा एक सजिलो-सिक्न र अनुमानित ढाँचा पछ्याउँदछ। एक पटक तपाईं एक नियमित जर्मन क्रियाकलापको लागि ढाँचा सिक्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ कि सबै जर्मन क्रियाहरू विगतमा भ्रामक हुन्छन्। अनियमित क्रियाहरू अतीतमा एउटै नियमहरू पछ्याउँदैन, तर किनकि प्रायः जर्मन क्रियाकलापहरू नियमित छन्, यसले तपाईंको शिक्षा कार्य केही सरल बनाउन सक्छ।
तल चार्ट एक सरल नियमित जर्मन क्रिया को सरल अतीत र वर्तमान मा वर्तमान मा प्रदर्शित गर्दछ।
सबै नियमित जर्मन क्रियाकलापहरू एउटै ढाँचा पछ्याउँछन्। हामीले जर्मनमा नियमित क्रियाकलाप सामान्य को एक उपयोगी नमूना सूची पनि समावेश गरेका छौं।
आधारभूत (सरल विगत)
कुनै पनि नियमित जर्मन क्रियाको आधारभूत आधारले प्रयोग गर्दछ जुन अतीतको अतीतको जस्तै अंग्रेजीमा अतीतको अन्त्यमा सरल अतीत बनाइन्छ। क्रियाकलापमा अतीतको अन्त्यमा थपिएको शब्द हालैको अवधिमा समान रूपमा राखिएको छ। "उनले खेले" यसैले एरिक स्पिलिट हुन्छ। साधारण अतीतमा कुनै पनि नियमित क्रियाकलापलाई पराजित गर्न, तपाइँ भर्खरै टाढाको स्टेमको अन्त्य थप्नुहोस्।
वर्तमान तनावको रूपमा, हरेक "व्यक्ति" (त्यो, तपाई, तिनीहरू, आदि) क्रियामा आफ्नै अन्तको आवश्यकता पर्दछ। त्यहाँ जर्मन सरल विगतको तनावमा चार (4) अनोखी अन्तहरू छन्, वर्तमान अवधारणामा एक भन्दा कम (किनभने ich र तेस्रो व्यक्तिका लागि अन्त्यहरू अतीतमा समान छन्)।
सरल अतीतको अन्त्यमा निम्न हुन्: - तपाई (ich, er / sie / es), - परीक्षण (डु), - टेट (ईर), र - दस (से, त्यहाँ, [ pl। ])। अङ्ग्रेजीको विपरीत, अतीतको अन्त्य अन्त्य सधैं होईन: मैले = ich spielte खेले, हामीले खेल्ने = त्यहाँ spielten ।
अब साधारण अतीत को समयमा सबै spjugations को conjugations देखो। (वर्तमान सिद्ध (तल) बनाम सरल अतीत प्रयोग गर्ने बारे थप जान्न, दुई जर्मन विगतको टेन्सनहरू हेर्नुहोस्।)
SPIELEN / प्ले गर्न
सरल अतीत तनाव - Imperfekt
Deutsch अंग्रेजी नमूना वाक्य
ich spiel te मैले खेले Ich spielte बास्केटबल।
du spiel test तिमी ( अज्ञात। )
खेले Spieltest du Schach? (शतरंज)
er spiel te उसले खेल्यो Er spielte mit mir। (म संग)
sie spiel te उनले खेले यहाँ क्लिक गर्नुहोस Karten। (कार्डहरू)
es spiel te यो खेले Es spielte keine Rolle। (यसले कुरा गर्दैन।)
wir spiel ten हामीले खेल्यौ Wir spielten बास्केटबल।
Ihr spiel tet तिमी (मान्छे) खेले Spieltet ihr एकाधिकार?
sie spiel ten तिनीहरु खेले यो गोल्फ।
यस शब्द को दस तिमीले खेले Spieltenie हे हीट? ( सहि , औपचारिक "तपाई," एकल र बहुसंख्यक हो।)
अधिक क्रियाहरू 20 मा धेरै प्रयोग गरिएका जर्मन क्रियाहरू
आधारभूत (वर्तमान परम्परागत)
सबै नियमित जर्मन क्रियाकलापहरूसँग तेस्रो व्यक्ति एकल फारममा आधारित आधारभूत अवस्थित फारम फारम छ। तेस्रो व्यक्ति क्रिया spielen को रूप हो (er) spielt । यसको लागि भौगोलिक उपसर्ग जोड्नुहोस् र तपाईले पहिलेको सहभागी प्राप्त गर्नुभयो: gespielt । सबै नियमित क्रियाकलापहरूले यो पद्धति पछ्याउँछ: gesagt , gemacht , getanzt , आदि।
हालको उत्तम तनाव सिर्जना गर्न, तपाईं विगतका सहभागी ( gespielt / खेलेका) ले लिनुहोस् र यसलाई सहयोगको साथ प्रयोग गर्नुहोस् वा क्रिया (क्रियाकलापको प्राय: कहिलेकाँही सिइन ) प्रयोग गर्नुहोस्। वर्तमान सिद्ध तनाव यसको नाम हो भन्ने तथ्य हो कि तपाइँ सहायक क्रिया को वर्तमान तनाव को सहभागिता संग तनाव को रूप मा जोड दिए। ( अतीत सही सिद्ध छ, सहायक क्रिया को पछिल्लो तनाव को उपयोग गरेर।) धेरै मामलाहरु मा, पहिले भाग लिया वाक्य को अन्त मा राखयो: "Wir haben मंजान Nacht getanzt।" (हामीले सबै रात नाच्यौं।)
जर्मन अफ्ठ्यारोमा "मैले खेलाडी" (वा "मैले खेलेको") भन्नको लागि, तपाईंले यसो भन्नुहुन्छ: "आईच हेबे गेसपेल्ट।" तपाइँले तल चार्ट अध्ययन गरे पछि, तपाईं अझ राम्रो विचार बुझ्नुहुनेछ।
वर्तमान सिद्ध तनाव - प्रतिफल
ich habe gespielt मैले खेले
मैले खेलेको छु Ich habe बास्केटबल gespielt।
du hast gespielt तिमी ( fam। ) खेले
तिमीले खेलेका छौ Hast du Schach gespielt?
er hat gespielt उसले खेल्यो
उनले खेलेका छन् Er hat mit mir gespielt।
sie hat gespielt उनले खेले
उनले खेलेका छन् यो टोपी कार्टन गेसपेल्ट छ।
es hat gespielt यो खेले
यसले खेलेको छ Es hat keine Rolle gespielt। (यसले कुरा गर्दैन।)
wir haben gespielt हामीले खेल्यौ
हामीले खेलेका छौं Wir haben बास्केटबल gespielt।
Ihr habt gespielt तिमी (मान्छे) खेले
तिमीले खेलेका छौ Habt ihr Monoploy gespielt?
sie haben gespielt तिनीहरु खेले
तिनीहरूले खेलेका छन् Sie haben गोल्फ gespielt।
Sie haben gespielt तिमीले खेले
तिमीले खेलेका छौ Haben Sie hees gespielt?
माथिको चार्टमा सूचना दिनुहोस् कि जर्मन वर्तमान सिद्ध तनाव अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ "दुई छ" बिना वा बिना। अङ्ग्रेजी अभिव्यक्तिहरूका लागि जर्मन उपस्थित पुरा नभएका गलत प्रयोगबाट बच्न सावधान रहनुहोस्, "मैले फ्रान्कफर्टमा पाँच वर्षको लागि (अब) छु।" जर्मनमा हालको तनावमा सीता संग व्यक्त गरिनेछ: "फ्रान्सफर्ट मा आईजे वोन सेन फरफन जेनन।"
थप नियमित शब्दहरू
अंग्रेजी Deutsch सरल विगत पुर्ण भूतकाल
जवाफ दिनुहोस् Antworten antwortete * geantwortet *
सोध्नु fragen कमजोर gefragt
निर्माण गर्नुहोस् bauen baute gebaut
लागत कोस्टन kostete * gekostet *
अन्त enden endete * geendet *
सुन्नुहोस् hören hörte gehört
भन्नुहोस् sagen sagte gesagt
* एक नियमित क्रिया जसको स्टेमले अन्त्य गर्दछ वा टाँस्नु अघि पहिले (टाटा) वा टा (अघिल्लो भाग लिने) समाप्त हुँदैछ।
शीर्ष अंग्रेजी सिकनर शब्दहरू
फ्रान्सेलीमा सोइर र सोइराइ प्रयोग गर्ने मार्गदर्शनको
स्पेनिशहरूमा व्यवसायहरूको नाम
पोर्टर, एसबिलर, सेन्ट मेटर एन ... बोल्न "बोल्न" फ्रेन्चमा
Arigatou gozaimasu - सरल जापानी वाक्यांशहरु
एक राम्रो फ्रेंच व्यापार पत्र को तत्व
दैनिक मन्डारिन पाठ: "खुसी" चिनियाँमा
फ्रेन्च शब्दावली: वस्त्र
इटालियनमा पहिलो-संकरण (-are) शब्दहरू कसरी बनाउने?
मजेदार ट्रिक वा गिगलग र चिलिङ्ग ल्याउने कुराहरू व्यवहार गर्नुहोस्
सुपर बाउल खेलबाट छुट्टै राख्नु
बौद्धहरूले के विश्वास गर्छन्?
Shemini Atzeret र Simchat टोरा
लेखन र भाषणमा एनालॉगहरूको मूल्य
बाइबलले आफ्नै बारेमा के भन्छ?
ग्रह ग्रह को खोज्नुहोस्
बुश सिद्धान्त बुझ्ने
के यसले कन्या बढ्दै हुनुहुन्छ भने यो कस्तो लाग्छ?
आर्कगेलिल गब्रिएल, प्रकाशको दूतलाई भेट्नुहोस्
ओर्कवेलको '1984' बाट शब्दावली शब्दहरू
जिम जोन्स र पीपुल्स म्यानको जीवनी
Centeotl - मक्का को एजटेक भगवान (या देवी)
इलेक्ट्रोनिक स्थिरता नियन्त्रण (ईएससी)
रंगवाद को प्रभाव
90s-थिस्ड क्रूजजसँग बोर्डमा पाउनुहोस्
अंग्रेजीमा डबल प्ललहरू
कसैले तपाईंलाई माया गर्छ, श्री हेच
नजिकको ताराहरू सूर्यलाई अन्वेषण गर्नुहोस्
शीर्ष दस पुराना गीतहरु को 1971 को